Filaharan’ny votoatiny araka ny vanim-potoana
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 1
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 2
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 3
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 4
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 5
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 6
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 7
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 8
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 9
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 10
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 11
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 12
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 13
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 14
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 15
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 16
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 17
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 18
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 19
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 20
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 21
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 22
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 23
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 24
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 25
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 26
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 27
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 28
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 29
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 30
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 31
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 32
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 33
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 34
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 35
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 36
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 37
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 38
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 39
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 40
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 41
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 42
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 43
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 44
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 45
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 46
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 47
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 48
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 49
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 50
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 51
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 52
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 53
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 54
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 55
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 56
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 57
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 58
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 59
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 60
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 61
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 62
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 63
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 64
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 65
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 66
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 67
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 68
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 69
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 70
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 71
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 72
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 73
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 74
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 75
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 76
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 77
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 78
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 79
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 80
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 81
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 82
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 83
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 84
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 85
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 86
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 87
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 88
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 89
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 90
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 91
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 92
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 93
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 94
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 95
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 96
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 97
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 98
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 99
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 100
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 101
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 102
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 103
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 104
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 105
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 106
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 107
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 108
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 109
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 110
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 111
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 112
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 113
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 114
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 115
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 116
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 117
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 118
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 119
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 120
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 121
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 122
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 123
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 124
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 125
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 126
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 127
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 128
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 129
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 130
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 131
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 132
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 133
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 134
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 135
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 136
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 137
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 138
Filazana Ôfisialy 1
Filazana Ôfisialy 2
Fikirakirana ny soratra
Endriny hatrany am-boalohany
Ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana dia firaketana ireo fanambarana avy amin’ Andriamanitra sy ireo fanambarana avy amin’ny fitaoman’ny Fanahy, nomena mba ho fanorenana sy ho fitantanana ny fanjakan’ Andriamanitra eto an-tany amin’ny andro farany. Na dia mivantana amin’ny mpikambana ao amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany aza ny ankabeazan’ireo fizarana, ny hafatra, ny fampitandremana ary ny fanentanana kosa dia natao ho tombontsoan’ny olombelona rehetra ary mirakitra fanasana ny olon-drehetra, na aiza na aiza, hihaino ny feon’i Jesoa Kristy miteny aminy ho an’ny fiadanany ara-nofo sy ho an’ny famonjena azy haharitra mandrakizay.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ny 1 nôvambra 1831 nandritra ny fihaonambe manokana nataon’ireo loholon’ny Fiangonana tao Hiram, Ohio. Maro ireo fanambarana efa noraisina tamin’ny Tompo talohan’io fotoana io, ary ny fanangonana azy ireo mba havoaka ho boky no anankiray tamin’ireo ventin-draharaha nankatoavina tamin’io fihaonambe io. Miendrika ho sasin-tenin’ny Tompo ho an’ireo fotopampianarana sy fanekempihavanana ary didy nomena amin’izao fotoampitantanana izao ity fizarana ity.
Ampahany nalaina tao amin’ny tantaran’i Joseph Smith izay mitantara ny tenin’ny anjely Môrônia tamin’i Joseph Smith Mpaminany, raha mbola tao an-tranon-drainy tao Manchester, New York, ny Mpaminany, ny harivan’ny 21 septambra 1823. I Môrônia no farany tamin’ireo mpahay tantara maro nifandimby izay nanao ny rakitsoratra izay atolotra ankehitriny an’izao tontolo izao amin’ny anarana hoe ny Bokin’i Môrmôna. (Ampitahao amin’ny Malakia 3:23–24; ary koa ny fizarana 27:9; 110:13–16; sy 128:18.)
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania, ny volana jolay 1828, momba ny fahaverezan’ny sora-tanana 116 takila, dikanteny ampahany voalohany avy tamin’ny Bokin’i Môrmôna, izay nantsoina hoe ny bokin’i Lehia. Tamim-pahalainana no namelan’ny Mpaminany ny hifindran’ireo takila ireo avy eo am-pelatanany ho eo am-pelatanan’i Martin Harris izay efa nanompo toy ny mpitantsoratra nandritra ny fotoana fohy tamin’ny fandikana ny Bokin’i Môrmôna. Nomena tamin’ny alalan’ny Orima sy Tomima ny fanambarana. (Jereo fizarana 10.)
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an-drainy, i Joseph Smith rainy tao Harmony, Pennsylvania ny volana febroary 1829.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania ny volana martsa 1829 noho ny fangatahan’i Martin Harris.
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Oliver Cowdery tao Harmony, Pennsylvania ny volana aprily 1829. Natombok’i Oliver Cowdery ny asan’ny mpitantsoratra tamin’ny fandikana ny Bokin’i Môrmôna ny 7 aprily 1829. Efa avy nandray ny fanehoana avy amin’ Andriamanitra ny amin’ny fahamarinan’ny tenivavolombelon’ny Mpaminany momba ireo takelaka izay nisokirana ny rakitsoratry ny Bokin’i Môrmôna izy. Nanontany ny Tompo tamin’ny alalan’ny Orima sy Tomima ny Mpaminany ary nandray izao valinteny izao.
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Oliver Cowdery tao Harmony, Pennsylvania, ny volana aprily 1829, tamin’izy ireo nanontany tamin’ny alalan’ny Orima sy Tomima raha toa ka nitoetra tao amin’ny nofo na efa maty i Jaona, ilay mpianatra lalaina. Ny fanambarana dia fandikana ilay rakitsoratra nataon’i Jaona tamin’ny boky hoditra ary nafenin’ny tenany ihany.
Fanambarana nomena an’i Oliver Cowdery tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania, ny volana aprily 1829. Nandritra ny fandikana ny Bokin’i Môrmôna, i Oliver izay nanohy ny asan’ny mpitantsoratra ka nanoratra ny teny notononin’ny Mpaminany dia naniry ny hotafiana amin’ny fanomezam-pahasoavan’ny fandikan-teny. Namaly ny fitalahoany tamin’ny fanomezana ity fanambarana ity ny Tompo.
Fanambarana nomena an’i Oliver Cowdery tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania, ny volana aprily 1829. Nanarina i Oliver mba hanam-paharetana, ary notaomina izy tamin’izay fotoana izay hianina amin’ny fanoratana ny teny notononin’ny mpandika teny fa tsy hiezaka handika.
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania, ny taom-pahavaratra, nanodidina ny volana aprily 1829 angamba, na dia nisy aza ampahany mety ho voaray tany am-piandohan’ny fahavaratra 1828. Tamin’izany no nilazan’ny Tompo tamin’i Joseph ny momba ireo fanovana nataon’ireo olon-dratsy tamin’ireo sora-tanana 116 takila avy tamin’ny fandikana ny bokin’i Lehia, ao amin’ny Bokin’i Môrmôna. Very tany amin’i Martin Harris izay nanankinana izany vetivety ireo sora-tanana tamin’ny takila ireo. (Jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 3.) Ny fikasana mamohehatra dia ny miandry ny fandikana indray ny zavatra voarakitra ao amin’ireo takila nangalarina, ary avy eo dia ny manala baraka ny mpandika teny amin’ny fampisehoana ireo zavatra mifanohitra vokatry ny fanovana. Ity fikasana mamohehatra nokotrehan’ilay ratsy ity dia efa fantatry ny Tompo eny fa na dia mbola tamin’ny fotoana nanaovan’i Môrmôna, ilay mpahay tantara Nefita fahiny, ny famintinana ireo takelaka voangona, ary hita ao amin’ny Bokin’i Môrmôna izany (Jereo ny Tenin’i Môrmôna 1:3–7).
Fanambarana nomena, tamin’ny alalan’i Joseph Smith mpaminany ho an’i Hyrum Smith rahalahiny tao Harmony, Pennsylvania, ny volana mey 1829. Noraisina tamin’ny alalan’ny Orima sy Tomima ity fanambarana ity ho valin’ny fitalahoana sy ny fanontanian’i Joseph. Araka ny tantaran’i Joseph Smith dia noraisina taorian’ny famerenana indray ny Fisoronana Aharôna ity fanambarana ity.
Fanambarana nomena an’i Joseph Knight rainy, tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania, ny volana mey 1829. Ninoan’i Joseph Knight ny filazan’i Joseph Smith momba ny fananany ny takelaky ny Bokin’i Môrmôna sy ny asa fandikana izay teo an-dalam-pitohizana tamin’izay, ary imbetsaka izy no efa nanome an’i Joseph Smith sy ny mapndika sorany fanampiana mivantana izay nahafan’izy ireo nanohy ny fandikan-teny. Noho ny fangatahan’i Joseph Knight dia nanadina ny Tompo ny Mpaminany ary nandray ny fanambarana.
Notsongaina avy tamin’ny tantaran’i Joseph Smith izay mitantara ny fanosorana ny Mpaminany sy sy an’i Oliver Cowdery ho amin’ny Fisoronana Aharôna tany akaikin’i Harmony, Pennsylvania, ny 15 mey 1829. Ny fanosorana dia notanterahan’ny tanan’ny anjely iray izay nitono-tena ho i Jaona, dia ilay atao hoe Jaona Mpanao Batisa ihany ao amin’ny Testamenta Vaovao. Nanazava ilay anjely, fa izy dia miasa eo ambany fitarihan’i Petera, i Jakoba ary i Jaona, ireo Apôstôly fahiny izay nihazona ny fanalahidin’ny fisoronana ambony kokoa, izay nantsoina hoe ny Fisoronana Melkizedeka. Nomena an’i Joseph sy i Oliver ny fampanantenana fa amin’ny fotoana mahamety izany dia hotolorana an’io fisoronana ambony kokoa izy ireo. (Jereo fizarana 27:7–8, 12.)
Fanambarana nomena an’i David Whitmer tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny volana jona 1829. Nanjary liana tamin’ny fandikana ny Bokin’i Môrmôna ny fianakaviana Whitmer. Niorim-ponenana tao an-tokantranon’i Peter Whitmer rainy ny Mpaminany, izay nitoerany ambara-pahatontosa ny asa fandikana hatramin’ny farany ary ambara-pahazo ny zo ahafahana mandika ilay boky efa akaiky hivoaka. Ny telo tamin’ireo zanakalahin’i Whitmer rehefa nahazo ny tenivavolombelona ny amin’ny fahamarinan’ny asa dia nanjary sahiran-tsaina fatratra ny amin’ny andraikitry ny tenan’ny tsirairay avy taminy. Ity fanambarana ity sy ireo roa manaraka azy (fizarana 15 sy 16) dia nomena ho valin’ny fanontaniana tamin’ny alalan’ny Orima sy Tomima. Nanjary anankiray tamin’ireo Vavolombelona Telon’ny Bokin’i Môrmôna i David Whitmer taty aoriana.
Fanambarana nomena an’i John Whitmer, tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny volana jona 1829 (jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 14). Manaitra ny fiantefan’ilay hafatra manokana, satria ny Tompo dia nilaza izay tsy nisy nahalala afa-tsy i John Whitmer sy ny Tenany ihany. Nanjary anankiray tamin’ireo Vavolombelona Valon’ny Bokin’i Môrmôna i John Whitmer taty aoriana.
Fanambarana nomena an’i Peter Whitmer zanany tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny volana jona 1829 (jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 14). Nanjary anankiray tamin’ireo Vavolombelona Valon’ny Bokin’i Môrmôna i Peter Whitmer zanany taty aoriana.
Fanambarana nomena an’i Oliver Cowdery, i David Whitmer ary i Martin Harris tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny volana jona 1829, talohan’ny nahitan’izy ireo ny takelaka misy soratra voasikotra izay nitahiry ny rakitsoratry ny Bokin’i Môrmôna. Nianaran’i Joseph sy i Oliver Cowdery mpandika sorany avy tamin’ny fandikana ny takelaky ny Bokin’i Môrmôna fa hisy vavolombelona manokana telo hotendrena (jereo Etera 5:2–4; 2 Nefia 11:3; 27:12). Nentanin’ny faniriana avy tamin’ Andriamanitra i Oliver Cowdery, i David Whitmer ary i Martin Harris mba ho izy ireo no ho ireo vavolombelona manokana telo. Nanontany ny Tompo ny Mpaminany ka nomena ity fanambarana ity ho valin’izany tamin’ny alalan’ny Orima sy Tomima
Fanambarana ho an’i Joseph Smith Mpaminany, i Oliver Cowdery ary i David Whitmer, nomena tao Fayette, New York, ny volana jona 1829. Araka ny voalazan’ny Mpampinany ny Mpaminany, ity fanambarana ity dia nampahafantatra “ny fiantsoana ny apôstôly roa ambin’ny folo amin’izao andro farany izao ary koa torolalana momba ny fanorenana ny Fiangonana.”
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith tao Manchester, New York, tamin’ny fahavaratry taona 1829 angamba. Ao amin’ny tantarany, ny Mpaminany dia nampahafantatra izany hoe “didin’ Andriamanitra fa tsy an’olombelona, ho an’i Martin Harris, nomen’ilay Izy izay Mandrakizay.”
Fanambarana momba ny fandaminana sy ny fitantanana ny Fiangonana, nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany, tao Fayette, New York na teo akaikiny. Mety nomena raha vao nanomboka ny fahavaratry ny taona 1829 ny ampahany tamin’ity fanambarana ity. Ilay fanambarana feno izay nantsoina tamin’izany fotoana izany hoe Andinin-dalàna sy Fanekempihavanana dia angamba noraketina fotoana fohy taorian’ny 6 aprily 1830 (andro nanganana ny Fiangonana). Nanoratra ny Mpaminany hoe: “Nahazo izao manaraka izao Taminy [i Jesoa Kristy] izahay, tamin’ny alalan’ny fanahin’ny faminaniana sy ny fanambarana; izay tsy nanome anay filazalazana maro fotsiny fa nanondro anay koa ny andro voafaritra izay tokony hirosoanay araka ny sitrapony sy ny didiny amin’ny fananganana indray ny Fiangonany eto an-tany.”
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny 6 aprily 1830. Nomena nandritra ny fananganana ny fiangonana tamin’io daty voatondro io ity fanambarana ity, tao an-tranon’i Peter Whitmer rainy. Enin-dahy, izay efa natao batisa taloha, no nandray anjara tamin’izany. Tamin’ny safidy niraisana no nanehoan’ireo olona ireo ny faniriany sy ny finiavany hanangana ny fiangonana araka ny didin’ Andriamanitra (jereo fizarana 20). Nofidiany koa ny hanaiky sy hanohana an’i Joseph Smith zanany sy i Oliver Cowdery ho mpitarika miahy ny Fiangonana. Tamin’ny fametrahan-tanana avy eo no nanokanan’i Joseph an’i Oliver ho loholon’ny Fiangonana; ary natokan’i Oliver toy izany koa i Joseph. Taorian’ny fanatanterahana ny fanasan’ny Tompo, dia nametrahan’i Joseph sy i Oliver tanana ny mpivory tsirairay, ho fanomezana ny Fanahy Masina ary ho fanamafisana ny maha-mpikambana ny tsirairay ao amin’ny Fiangonana.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Manchester, New York, ny 6 aprily 1830. Nomena ny Fiangonana ity fanambarana ity noho ireo olona sasany izay efa vita batisa tany aloha ary naniry ny hikambana amin’ny Fiangonana saingy tsy haverina hatao batisa intsony.
Fanambarana dimy mifanesy nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Manchester, New York, ny volana aprily 1830 ho an’i Oliver Cowdery, i Hyrum Smith, i Samuel H. Smith, i Joseph Smith rainy ary i Joseph Knight rainy. Nanontany ny Tompo ny Mpaminany ary nandray fanambarana iray ho an’ny olona tsirairay ho setrin’ny faniriana nivaivay nananan’ireo olona dimy voalaza anarana ireo hahafantatra ny andraikiny avy.
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Oliver Cowdery tao Harmony Pennsylvania, ny volana jolay 1830. Na dia vao efa-bolana latsaka aza no lasana hatramin’ny nanorenana ny Fiangonana, dia nanjary nihamafy ny fanenjehana ary voatery nitsimbina ny ainy tamin’ny fitokana-monina tsindraindray ireo mpitondra. Ireto fanambarana telo manaraka ireto dia nomena tamin’izay fotoana izay mba hanatanjahana, hampaherezana, ary hampianarana azy ireo.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony Pennsylvania ny volana jolay 1830. (jereo ny sasin-teny ho an’ny fizarana 24). Maneho ny sitrapon’ny Tompo ho an’i Emma Smith, vadin’ny Mpaminany, ity fanambarana ity.
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany, i Oliver Cowdery ary i John Whitmer tao Harmony, Pennsylvania, ny volana jolay 1830 (jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 24).
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania, ny volana aogositra 1830. Ho fanomanana ny fanompoam-pivavahana izay handrosoana ny mofo sy ny divay dia nandeha nivoaka i Joseph haka divay. Notsenain’ny iraka iray avy any an-danitra izy ary nandray ity fanambarana ity izay ny ampahany no voasoratra tamin’io fotoana io ary ny ambiny tamin’ny volana septambra nanaraka. Rano ankehitriny no ampiasaina amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo ao amin’ny Fiangonana ho solon’ny divay.
Fanambarana nomena an’i Oliver Cowdery tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny volana septambra 1830. Nanana vato iray i Hiram Page izay mpikambana tao amin’ny Fiangonana ary nihambo ho nahazo fanambarana tamin’ny alalan’izany momba ny fananganana an’i Ziona sy ny fandaminana ny Fiangonana izy. Voafitak’izany filazana izany ny mpikambana maro, ary na dia i Oliver Cowdery aza dia voataonan’izany filazana diso izany. Taloha kelin’ny fihaonambe, dia nanontany ny Tompo tamin-kafanam-po momba ilay raharaha ny Mpaminany ka nahazo izao fanambarana manaraka izao.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany teo anatrehan’ny loholona enina tao Fayette, New York, ny volana septambra 1830. Ity fanambarana ity dia nomena andro vitsivitsy talohan’ny fihaonambe izay nanomboka ny 26 septambra 1830.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i David Whitmer, i Peter Whitmer zanany ary i John Whitmer tao Fayette, New York, ny volana septambra 1830, taorian’ny fihaonambe izay naharitra telo andro tao Fayette saingy talohan’ny niparitahan’ny loholon’ny Fiangonana. Tany am-piandohana dia navoaka ho fanambarana telo ity lahatsoratra ity; nakamban’ny mpaminany ho fizarana tokana izany ho an’ny fanontana tamin’ny taona 1835 ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i Thomas B. Marsh ny volana septambra 1830. Izany dia nitranga avy hatrany taorian’ny fihaonamben’ny Fiangonana (jereo ny sasin-teny ho an’ny fizarana 30). Natao batisa tany amin’ny fiandohan’io volana io i Thomas B. Marsh ary natokana ho loholon’ny Fiangonana talohan’ny nanomezana ity fanambarana ity.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i Parley P. Pratt sy i Ziba Peterson tany Manchester, New York, ny fiandohan’ny volana ôktôbra 1830. Tsapan’ireo loholona ho nahaliana fatratra sady niteraka hetaheta ny momba ny Lamanita izay naminaniana ireo fitahiana nianaran’ny Fiangonana avy tao amin’ny Bokin’i Môrmôna. Noho izany dia nitalahoany ny hanambaran’ny Tompo ny sitrapony raha toa ka tokony hirahina ho any amin’ireo foko Indiana any Andrefana ireo loholona tamin’izay fotoana izay. Nanaraka izany izao fanambarana izao.
Fanambarana nomena, tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany, ho an’i Ezra Thayre sy i Northrop Sweet tao Fayette, New York, ny volana ôktôbra 1830. Ny tantaran’i Joseph Smith dia nilaza rehefa nampiditra ity fanambarana ity fa “ny Tompo … dia vonona mandrakariva ny hampianatra ireo izay mazoto mikatsaka amin’ny finoana.”
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i Orson Pratt tao Fayette, New York, ny 4 nôvambra 1830. Sivy ambin’ny folo taona ny rahalahy Pratt tamin’io fotoana io. Niova fo sy natao batisa izy rehefa nandre ny fitorian’ny zokiny Parley P. Pratt, enina herinandro talohan’io, momba ny filazantsara naverina indray. Tao an-tranon’i Peter Whitmer rainy no nahazoana ity fanambarana ity.
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao an-tanàna na tao akaikin’ny tanànan’i Fayette, New York, ny volana 7 desambra 1830. Nisahana ny fanaovana ny fandikana ny Baiboly saika isan’andro ny Mpaminany tamin’io fotoana io. Natomboka tany amin’ny volana jona 1830 ny fandikana ary samy natao mpitantsoratra na i Oliver Cowdery na i John Whitmer. Noho izy ireo efa nantsoina ho amin’ny andraikitra hafa ankehitriny dia nantsoina tamin’ny alalan’ny fanendren’ Andriamanitra i Sidney Rigdon mba hatao mpitantsoratry ny mpaminany tamin’io asa io (Jereo ny andininy 20). Tao amin’ny sasin-tenin’ny rakitsorany momba ity fanambarana ity dia milaza ny tantaran’i Joseph Smith hoe: “Tonga [avy tany Ohio] i Sidney Rigdon tamin’ny volana desambra mba hanontany ny Tompo, ary niara-tonga taminy i Edward Patridge. … Fotoana fohy taorian’ny fahatongavan’ireo rahalahy roa ireo, dia niteny toy izao ny Tompo.”
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i Edward Partridge tao akaikin’i Fayette, New York, ny 9 desambra 1830 (jereo ny sasin-teny ho an’ny fizarana 35). Milaza ny tantaran’i Joseph Smith fa i Edward Partridge no “ohatra ny amin’ny toe-panahy araka an’ Andriamanitra ary anankiray amin’ireo lehilahy lehiben’ny Tompo.”
Fanambarana nomena ho an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao akaikin’i Fayette, New York, ny volana desambra 1830. Omena etoana ny didy voalohany momba ny fanangonana amin’ity fotoampitantanana ity.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny 2 janoary 1831. Tamin’ny fihaonamben’ny Fiangonana no nitrangan’izany.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i James Covel, tao Fayette, New York, ny 5 janoary 1831. I James Covel, izay efa mpitandrina Metôdista nandritra ny efapolo taona teo ho eo, dia nifanaiky tamin’ny Tompo fa hankatò izay didy rehetra homen’ny Tompo azy amin’ny alalan’i Joseph Mpaminany.
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao Fayette, New York, ny 6 janoary 1831. Talohan’ny niraketana ity fanambarana ity, dia milaza izao ny tantaran’ny Mpaminany hoe: “Noho i James [Covel] nitsipaka ny tenin’ny Tompo ary niverina amin’ny fitsipika nananany teo aloha sy ny olony, dia nomen’ny Tompo ahy sy an’i Sidney Rigdon izao fanambarana manaraka izao” (jereo ny fizarana 39).
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’ny Fiangonana tao Kirtland, Ohio, ny 4 febroary 1831. Manome torolalana ny Mpaminany sy ny loholon’ny Fiangonana ity fanambarana ity mba hivavaka hahazoana ny “lalàn’” Andriamanitra (jereo fizarana 42). Vao tonga tao Kirtland avy tany New York i Joseph Smith ary i Leman Copley izay mpikamban’ny Fiangonana tao akaikin’i Thompson, Ohio, “dia nangataka ny Rahalahy Joseph sy i Sidney [Rigdon] … mba hipetraka any aminy dia homeny trano sy vatsy izy ireo.” Ity fanambarana ity dia manazava ny toerana tokony hipetrahan’i Joseph sy i Sidney sy miantso koa an’i Edward Partridge ho eveka voalohan’ny Fiangonana.
Fanambarana nomena indroa miantoana tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 9 sy 23 febroary 1831. Ny ampahany voalohany izay ahitana ny andininy 1 ka hatramin’ny 72 dia noraisina teo anatrehan’ny loholona roa ambin’ny folo ary ho fanatanterahana ny fampanantenan’ny Tompo natao tany aloha, fa ny “lalàna” dia homena any Ohio (jereo ny fizarana 38:32). Ny ampahany faharoa dia ahitana ny andininy 73 ka hatramin’ny 93. Nomarihin’ny Mpaminany fa “mirakitra ny lalàn’ny Fiangonana” ity fanambarana ity.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny volana febroary 1831. Tamin’io fotoana io dia voakorontan’ireo olona nanao filazana diso ka nihambo ho mpanambara ny mpikambana sasany amin’ny Fiangonana. Nanontany ny Tompo ny Mpaminany ka nahazo ity filazana izay miantefa amin’ny loholon’ny Fiangonana ity. Ny ampahany voalohany dia mikasika ny fitondrana ny Fiangonana; ny ampahany faharoa dia mirakitra fampitandremana izay tokony hampitain’ireo loholona amin’ireo firenena eto an-tany.
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao Kirtland, Ohio, tamin’ny faramparan’ny volana febroary 1831. Ho fanarahana ny toromarika aroso etoana, dia notapahin’ny Fiangonana ny hisian’ny fihaonambe amin’ny fiandohan’ny volana jona manaraka.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’ny Fiangonana tao Kirtland, Ohio, ny 7 martsa 1831. Rehefa nosoratana ny sasin-tenin’ity fanambarana ity dia izao no lazain’ny tantaran’i Joseph Smith hoe: “Amin’izao vanim-potoan’ny Fiangonana izao, dia … tatitra diso maro … sy tantara adaladala no navoaka … ary naparitaka … mba hisakanana ny olona tsy hanadihady ny asa, na hanaiky ny finoana. … Nefa akory ny hafalian’ireo Olomasina … raha noraisiko izao manaraka izao.”
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’ny Fiangonana tao Kirtland, Ohio, ny 8 martsa 1831. Tamin’izany fotoana vao niandohan’ny Fiangonana izany, dia tsy mbola voavolavola ny fomba iraisana hitondrana ireo fivoriam-piangonana. Saingy ny fahazarana tsy mampiditra amin’ny fivoriana fanasan’ny Tompo sy amin’ireo fivoriana hafa an’ny Fiangonana afa-tsy ny mpikambana sy ireo naman’ny Fiangonana tena mafana fo dia efa nanjary fanao raikitra. Ity fanambarana ity dia maneho ny sitrapon’ny Tompo momba ny fitondrana sy ny fitarihana ireo fivoriana ary ny torolalany mikasika ny fikatsahana sy ny famantarana ireo fanomezam-pahasoavan’ny Fanahy.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtand, Ohio, ny 8 martsa 1831. Nisalasala i John Whitmer tamin’ny voalohany, izay efa mpitambokin’ny Mpaminany rehefa nangatahina mba ho mpahay tantaran’ny Fiangonana sy ho mpitamboky ka handimby an’i Oliver Cowdery. Nanoratra izy hoe: “Aleoko tsy manao izany fa mandinika hoe aoka ho tanteraka izay sitrapon’ny Tompo, ka raha iriany izany dia iriako ny mba hanehoany izany amin’ny alalan’i Joseph ilay Mpahita.” Rehefa avy nandray izany fanambarana izany i Joseph Smith dia nanaiky i John Whitmer ary nanompo tao amin’ny andraikitra nanendrena azy.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 10 martsa 1831. Nanontany ny Tompo ny Mpaminany ny amin’ny fomba tokony harahina eo amin’ny fahazoana tany honenan’ny Olomasina. Zava-dehibe izany noho ny fifindra-monin’ny mpikambana ao amin’ny Fiangonana avy any atsinanan’i Etazonia, izay nankatò ny didin’ny Tompo fa izy ireo dia tokony hivondrona ao Ohio (jereo fizarana 37:1–3; 45:64).
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i Sidney Rigdon, i Parley P. Pratt ary i Leman Copley tao Kirtland, Ohio, ny 7 mey 1831. Efa nanaiky ny filazantsara i Leman Copley saingy mbola nitana ny sasantsasany tamin’ny fampianaran’ny Shakers (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing) [Firaisan’ny Fiarahamonin’ny Mpino ny Fisehoan’i Kristy Fanindroany], izay nisy azy tany aloha. Anisan’ny zavatra inoan’ireo Shakers ny hoe efa nitranga sahady ny Fiavian’i Kristy Fanindroany ary efa niseho tamin’ny endriky ny vehivavy iray atao hoe Ann Lee Izy. Tsy noheverin’izy ireo ho zavatra manan-danja ny batisan’ny rano. Nandà ny fanambadiana izy ireo ary nino ny fiainana ao anatin’ny fitovoana tanteraka. Nandrara ny fihinanan-kena koa ny Shakers sasany. Tamin’ny nanoratana ny sasin-tenin’ity fanambarana ity dia izao no voalazan’ny tantaran’i Joseph Smith: “Mba hahazoana fahalalana feno kokoa momba ilay toe-draharaha, dia nanontany ny Tompo aho ary nandray izao manaraka izao.” Nolavin’ny fanambarana ny sasany amin’ireo fisainana fototra an’ny vondrona Shaker. Nentin’ireo rahalahy voalaza etsy ambony ireo tany amin’ny fiarahamonina Shaker (tao akaikin’i Cleveland, Ohio) ny soson’ilay fanambarana ary novakiany manontolo taminy saingy notsipahina.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 9 mey 1831. Milaza ny tantaran’i Joseph Smith fa ny sasany tamin’ireo loholona dia tsy nahatakatra ny fisehoan’ireo fanahy samy hafa miely patrana eto an-tany, ka nomena ity fanambarana ity ho setrin’ny fanontaniany manokana ny amin’izany toe-javatra izany. Ireo fitrangana lazaina fa ara-panahy dia tsy vitsy teo anivon’ny mpikambana, izay nihambo ho nahazo fahitana sy fanambarana ny sasany taminy.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Thompson, Ohio, ny 20 mey 1831. Tamin’io fotoana io dia nanomboka tonga tao Ohio ireo Olomasina nifindra monina avy tamin’ireo faritra atsinanana, ka nanjary nilaina ny hanaovana fandaminana raikitra momba ny fiorenam-ponenany. Noho ny fisahanana ity raharaha ity niankina indrindra tamin’ny anjara fanompoan’ny eveka dia nitady toromarika ny amin’ity raharaha ity ny Eveka Edward Partridge, hany ka nanontany ny Tompo ny Mpaminany.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’ny loholon’ny Fiangonana tao Kirtland, Ohio, ny 6 jona 1831. Natao tao Kirtland ny fihaonambe izay nanomboka ny fahatelon’ny volana jona ary nifarana ny fahenina. Tamin’io fihaonambe io no nanaovana voalohany ny fanokanana manokana ho amin’ny anjara fanompoan’ny mpisorona avo, ary tsikaritra ny fisehoan’ireo fanahy sandoka sy mpamitaka vitsivitsy ka noroahina.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i Algernon Sidney Gilbert tao Kirtand, Ohio, ny 8 jona 1831. Noho ny fangatahan’i Sidney Gilbert, dia nanontanian’ny Mpaminany ny Tompo ny momba ny asa sy ny antso ho an’ny Rahalahy Gilbert ao amin’ny Fiangonana.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i Newel Knight tao Kirtland, Ohio, ny 10 jona 1831. Nisara-bazana ny mpikamban’ny Fiangonana nipetraka tao Thompson, Ohio, noho ireo raharaha mikasika ny fanokanana fananana. Niharihary ny fitiavan-tena sy ny fimatimatesan-karena. Taorian’ny asa nanirahana azy tany amin’ny Shakers (jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 49), dia tsy notanan’i Leman Copley ny fanekeny hanokana ny toeram-piompiana sy fambolena midadasika nananany ho toerana lovain’ireo Olomasina tonga avy any Colesville, New York. Noho izany dia nanatona ny Mpaminany i Newel Knight (izay mpitarika ireo mpikambana nipetraka tao Thompson) sy ireo loholona hafa nanontany izay tokony hatao. Nanontany ny Tompo ny Mpaminany ary nandray izao fanambarana izao izay nandidy ireo mpikambana tao Thompson mba handao ny toeram-piompiana sy fambolen’i Leman Copley ary hanao dia mankany Missouri.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i William W. Phelps tao Kirtland, Ohio, ny 14 jona 1831. Vao tonga tao Kirtland i William W. Phelps mpanonta printy mbamin’ny fianakaviany ary nanontany ny Tompo ny momba azy ny Mpaminany.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 15 jona 1831. Ity fanambarana ity dia nanafay an’i Ezra Thayre noho ny tsy fankatoavany fanambarana anankiray teo aloha (ilay “didy” voaresaka ao amin’ny andininy faha 8), izay noraisin’i Joseph Smith ho azy, izay nanoro lalana an’i Thayre mikasika ny andraikiny ao amin’ny toeram-piompiana sy fambolen’i Frederick G. Williams izay nipetrahany. Ity fanambarana manaraka ity koa dia nanafoana ny fiantsoana an’i Thayre hanao dia any Missouri miaraka amin’i Thomas B. Marsh (jereo fizarana 52:22).
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Ziona, Fivondronan’i Jackson, Missouri, ny 20 jolay 1831. Ho fankatoavana ny didin’ny Tompo handeha ho any Missouri izay toerana hanambarany “ny tany lovanareo” (fizarana 52), dia nandeha avy tany Ohio nankany amin’ny sisintany andrefan’i Missouri ireo loholona. Nisaintsaina ny toe-piainan’ny Lamanita i Joseph Smith ary nanontany tena hoe: “Rahoviana ny tany foana no hamony tahaka ny raozy? Rahoviana i Ziona no haorina ao amin’ny voninahiny, ary aiza no hatsangana ny Tempolinao izay any no handehanan’ireo firenena rehetra amin’ny andro farany?” Taorian’izany dia nandray ity fanambarana ity izy.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Ziona, Fivondronan’i Jackson, Missouri, ny 1 aogositra 1831. Ny maraindrainan’ny Sabata voalohany nanaraka ny fahatongavan’ny Mpaminany sy ireo mpiara-dia taminy tao amin’ny Fivondronan’i Jackson, Missouri, dia nisy fanompoam-pivavahana natao ary natao batisa ny mpikambana roa. Nandritra io herinandro io no nahatongavan’ny sasany tamin’ireo Olomasin’i Colesville, avy ao amin’ny Sampan’i Thompson mbamin’ireo hafa (jereo fizarana 54). Liana ny maro ny hianatra ny sitrapon’ny Tompo momba azy ireo eo amin’ny toerana vaovao hiangonana.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Ziona, Fivondronan’i Jackson, Missouri, ny 7 aogositra 1831. Talohan’ity fanambarana ity dia notokanana ilay tany araka izay efa nandidian’ny Tompo, ary natokana ny toerana ho an’ny tempoly any aoriana. Nodimandry tamin’ny andro nandraisana ity fanambarana ity i Polly Knight, vadin’i Joseph Knight rainy, izay mpikambana voalohany maty tao Ziona. Noraisin’ny mpikambana tany am-piandohana ho toy ny “fanomezana torolalana ny Olomasina mikasika ny fomba hanajana ny sabata sy ny fomba fifadian-kanina sy fivavahana” ity fanambarana ity.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany, tao Independence Fivondronan’i Jackson, Missouri, ny 8 aogositra 1831. Tamin’izay fotoana izay, ireo loholona izay nandeha tany amin’ny Fivondronan’i Jackson sy nandray anjara tamin’ny fanokanana ilay tany sy ny toerana ho an’ny tempoly dia naniry ny hahafantatra ny zavatra tokony hataony.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany teo amoron’ny Renirano Missouri, teo McIlwaine’s Bend, ny 12 aogositra 1831. Rehefa niverina tamin’ny diany ny Mpaminany sy ireo loholona folo mba hankany Kirtland, dia nitaingin-dakana izy ireo nidina ny Renirano Missouri. Nandalo tamin’ny loza maro izy ireo tamin’ny andro fahatelon’ny diany. Nahita ny mpandringana nitety tamin-kery ny teny ambonin’ny rano tamin’ny fahitana tamin’ny andro antoandro i William W. Phelps loholona.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany teo amoron’ny Renirano Missouri, tao Chariton, Missouri, ny 13 aogositra 1831. Tamin’io andro io dia nifanena tamin’ny loholona maro izay teny an-dalana ho any Ziona ny Mpaminany sy ny mpiara-dia taminy izay nandeha avy any Independence ho any Kirtland ka nahazo ity fanambarana ity taorian’ny fifampiarahabana feno fifaliana.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 30 aogositra 1831. Tafaverina tao Kirtland ny Mpaminany, i Sidney Rigdon ary i Oliver Cowdery ny 27 aogositra, taorian’ny famangiany tany Missouri. Manazava io fanambarana io ny tantaran’i Joseph Smith: “Amin’izao androm-pahazazan’ny Fiangonana izao dia nisy ny fahamaimaizana lehibe ny hahazo ny tenin’ny Tompo momba ny lohahevitra tsirairay, izay amin’ny lafiny rehetra dia mikasika ny famonjena antsika; ary satria ny tanin’i Ziona no raharahan’ny tany lehibe indrindra banjinina ankehitriny dia nangataka fanampim-pahalalana tamin’ny Tompo aho ny amin’ny fanangonana ny Olomasina sy ny fividianana ny tany ary ireo raharaha hafa.”
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’ireo loholon’ny Fiangonana tao Kirtland, Ohio, ny 11 septambra 1831. Teo am-piomanana ny hifindra monina any Hiram, Ohio, ny Mpaminany mba hanohy ny asany amin’ny fandikana ny Baiboly izay efa navela fony izy tany Missouri. Ny antokon’ireo rahalahy izay efa nodidina handeha ho any Ziona (Missouri) dia niolomay fatratra nanao ireo fiomanana mba hiaingana amin’ny volana ôktôbra. Tamin’io fotoana niheninkenenana io no nandraisana ny fanambarana.
Fanambarana mikasika ny vavaka nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany, tao Hiram, Ohio, ny 30 ôktôbra 1831.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny 29 ôktôbra 1831. Nanontany miafina ny Tompo i William E. McLellin mba hampahafantatra amin’ny alalan’ny Mpaminany ny valin’ny fanontaniana dimy izay tsy fantatr’i Joseph Smith. Noho ny fangatahan’i William E. McLellin, dia nanontany ny Tompo ny Mpaminany ary nandray izao fanambarana izao.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny voalohandohan’ny volana nôvambra 1831. Izany dia tamin’ny fotoan’ny fihaonambe manokana izay nandinihina sy nanapahana ny famoahana ho boky ireo fanambarana efa noraisina tamin’ny Tompo tamin’ny alalan’ny Mpaminany (jereo ny sasin-teny ho an’ny fizarana 1). Vao nanorina ny fanontana printin’ny Fiangonana i William W. Phelps tany Independence, Missouri. Nanapa-kevitra ny fihaonambe fa hamoaka ireo fanambarana ao amin’ny Book of Commandments (ny Bokin’ireo Didy) ary hanonta boky 10.000 (izay noho ireo olana tsy nampoizina dia nahena ho 3000 taty aoriana). Maro tamin’ireo rahalahy no nijoro ho vavolombelona marina tokoa, fa ireo fanambarana voangona tamin’izany fotoana izany mba havoaka dia tena marina tokoa, araka izay nambaran’ny Fanahy Masina nilatsaka tamin’izy ireo. Voarakitra ao amin’ny tantaran’i Joseph Smith fa taorian’ny nandraisana ny fanambarana antsoina hoe fizarana 1, dia nandeha ny resaka nanakiana ny fomba fiteny nampiasaina tamin’ireo fanambarana. Nanaraka izany izao fanambarana izao.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny 1 nôvambra 1831, ho valin’ny vavaka hahafantarana ny hevitry ny Tompo mikasika an’i Orson Hyde, i Luke S. Johnson, i Lyman E. Johnson, ary i William E. McLellin. Na dia nivantana ho an’ireo lehilahy efatra ireo aza ny ampahany amin’ity fanambarana ity dia miantefa amin’ny Fiangonana manontolo ny ankamaroan’ny votoatiny. Novelabelarina teo ambany fitarihan’i Joseph Smith io fanambarana io rehefa navoaka tao amin’ny edisiona 1835 tamin’ny Fotopampianarana sy Fanekepihavanana.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, 11 nôvambra 1831. Ny fitambaran’ireo fanambarana izay natao havoaka mialoha dia efa nankatoavin’ny fihaonambe manokana ny 1–2 nôvambra. Ny 3 nôvambra dia nampidirina ilay fanambarana izay miseho etoana ho fizarana 133, izay nantsoina hoe Tovana taty aoriana. Efa voatendry tany aloha i Oliver Cowdery hitondra ny dika tanan’ireo fanambarana sy didy natambatra ho any Independence, Missouri mba hanonta izany. Tokony hoentiny miaraka aminy koa ny vola izay efa narotsaka mba ho fananganana ny Fiangonana any Missouri. Ity fanambarana ity dia nanome torolalana an’i John Whitmer handeha hiaraka amin’i Oliver Cowdery ary koa nanendry an’i Whitmer mba hanao dia hanangonany ny tantara noho ny antsony izay amin’ny maha-mpahay tantara sy mpitambokin’ny Fiangonana.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny 12 nôvambra 1831. Ny tantaran’ny Mpaminany dia milaza fa fihaonambe manokana efatra no natao nanomboka ny 1 ka hatramin’ny 12 nôvambra iray manontolo. Nandritra ny fivoriana farany tamin’ireo fivoriana ireo no nandinihana ny maha-zava-dehibe ireo fanambarana izay aty aoriana havoaka hoe Book of Commandments (ny Bokin’ny Didy) ary avy eo hoe Fotopampianarana sy Fanekempihavanana. Io fanambarana io dia nomena taorian’ny nandanian’ny fihaonambe fa “sarobidy mihoatra noho ny haren’ny Tany manontolo” ireo fanambarana ireo. Ny tantaran’i Joseph Smith dia niantso ireo fanambarana hoe “fototry ny Fiangonana amin’izao andro farany izao, sy tombontsoan’izao tontolo izao izay maneho fa ireo fanalahidin’ireo misterin’ny fanjakan’ny Mpamonjy antsika dia ankinina amin’olombelona indray.”
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao Hiram, Ohio ny 1 desambra 1831. Nanohy ny fandikana ny Baiboly ny Mpaminany, ka i Sidney Rigdon no mpitantsoratra, ambara-pandraisana ity fanambarana ity, ka namelany izany vetivety tamin’izay fotoana izay, mba hahafahan’izy ireo manatanteraka ny toromarika nomena teo amin’izany. Ireo rahalahy dia tokony handeha hitory mba hampitony ny rivom-pankahalana izay efa nitombo nanohitra ny Fiangonana, vokatry ny famoahana taratasy maromaro nosoratan’i Ezra Booth izay efa nivadika.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirland, Ohio, ny 4 desambra 1831. Niara-nivory ny loholona sy ny mpikambana maromaro mba hianatra ny andraikiny ary hiorina bebe kokoa ao amin’ny fampianaran’ny Fiangonana. Ity fizarana ity dia fanatambarana fanambarana telo voaray ny androtriny. Ny andininy 1 ka hatramin’ny 8 dia mampahafantatra ny fiantsoana an’i Newel K. Whitney ho eveka. Nantsoina izy tamin’izay ka nohosorana, ary voaray taorian’izay ny andininy 9 ka hatramin’ny 23, izay nanome fanampim-panazavana momba ny andraikitry ny eveka. Nomena taorian’izany ny andininy 24 ka hatramin’ny 26, izay nanome torolalana mikasika ny fanangonana ho any Ziona.
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao Hiram, Ohio, ny 10 janoary 1832. Hatramin’ny tapany voalohan’ny volana desambra lasa teo, dia efa nirotsaka tamin’ny fitoriana ny Mpaminany sy i Sidney, ary tamin’izany dia be no vita ho fampihenana ireo fihetsika nisy tsy fankasitrahana izay nipoitra mba hanohitra ny Fiangonana (jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 71).
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao amin’ny Fivondronan’i Wayne, New York, tamin’ny 1830. Na dia talohan’ny niorenan’ny Fiangonana aza dia efa nipoitra ny fanontaniana mikasika ny tena fomba fanaovana batisa, ka nitarika ny mpaminany hikatsaka valiny momba izany lohahevitra izany. Milaza ny tantaran’i Joseph Smith fa io fanambarana io dia fanazavana ny 1 Korintiana 7:14, soratra masina iray izay nampiasaina matetika mba hanamarinana ny fanaovana batisan’ny zaza.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Amherst, Ohio, ny 25 janoary 1832. Ity fizarana ity dia ahitana fanambarana roa miavaka tsara (ny voalohany ao amin’ny andininy 1 ka hatramin’ny 22 ary ny faharoa ao amin’ny andininy 23 ka hatramin’ny 36) izay nomena tao anatin’ny andro iray ihany. Fotoan’ny fihaonambe tamin’izay izay nanohanana sy nanosorana an’i Joseph Smith ho Filohan’ny Fisoronana Avo. Nisy loholona vitsivitsy izay naniry ny hianatra ny andraikiny mivantana amin’ny antsipiriany kokoa. Nanaraka izao fanambarana izao.
Fahitana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao Hiram, Ohio, ny 16 febroary 1832. Ho sasin-tenin’ny fitantarana ity fahitana ity dia izao no voalazan’ny tantaran’i Joseph Smith: “Rehefa niverina avy tany amin’ny fihaonamben’i Amherst aho dia nanohy ny fandikana ny Soratra Masina. Niharihary tamin’ireo fanambarana efa voaray fa lafiny manan-danja maro momba ny famonjena ny olona no efa nesorina tao amin’ny Baiboly na very talohan’ny nanangonana azy. Miharihary ho azy avy amin’ireo fahamarinana izay tavela, fa raha mamaly ny tsirairay araka ny asa vita tao amin’ny vatana Andriamanitra, ny teny hoe ‘Lanitra,’ izay noheverina ho fonenana mandrakizay ho an’ny Olomasina, dia tsy maintsy ahitana fanjakana mihoatra ny anankiray. Araka izany … raha teo am-pandikana ny Filazantsaran’i Jaona izaho sy ny Loholona Rigdon dia nahita izao fahitana manaraka izao.” Teo am-pandikana ny Jaona 5:29 ny Mpaminany tamin’ny fotoana nanomezana ity fahitana ity.
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio tany amin’ny volana martsa 1832 tany. Izao no lazain’ny tantaran’i Joseph Smith, “Misy ifandraisany amin’ny fandikana ny Soratra Masina izao fanazavana noraisiko manaraka izao, izay momba ny Fanambaran’i Masindahy Jaona.”
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 1 martsa 1832. Tamin’io andro io dia nivory mba hiresaka momba ny raharahan’ny Fiangonana ny Mpaminany sy ireo mpitarika hafa. Ity fanambarana ity tamin’ny voalohany dia nanome torolalana ny Mpaminany, sy i Sidney Rigdon ary i Newel K. Whitney mba handeha any Missouri ka handrindra ny asa ahazoam-bola sy ny asa famoaham-boky an’ny Fiangonana amin’ny alalan’ny fananganana “orinasa” iray izay hanara-maso ireo ezaka atao ireo ka hamokatra vola mba hanorenana an’i Ziona sy ho tombontsoan’ny mahantra. Natsangana tamin’ny aprily 1832 io orinasa io izay nantsoina hoe Orinasa Miray ary noravana tamin’ny 1834 (jereo ny fizarana 82). Taorian’ny nandravana izany dia nosoloina teo ambany fitarihan’i Joseph Smith ho lasa “raharahan’ny trano fitehirizana ho an’ny mahantra” ilay andian-teny hoe “orinasam-barotra sy orinasa mpamoaka boky” tao amin’ity fanambarana ity, ary nosoloina hoe “rafitra” ilay teny hoe “orinasa.”
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny volana martsa 1832.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i Stephen Burnett, tao Hiram, Ohio, ny 7 martsa 1832.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny 15 martsa 1832. Voantso ho mpisorona avo sy ho mpanolotsaina ao amin’ny Fiadidiana ny Fisoronana Avo i Frederick G. Williams. Ireo rakitsoratra ara-tantara dia mampiseho fa nony noraisina ity fanambarana ity ny volana martsa 1832, dia niantso an’i Jesse Gause ho amin’ny anjara fanompoan’ny mpanolotsaina ho an’i Joseph Smith tao amin’ny Fiadidiana izany. Kanefa rehefa tsy nitozo ny fahavarany tamin’io antso io dia nomena an’i Frederick G. Williams ilay antso taty aoriana. Tokony horaisina ho toy ny dingana mankany amin’ny fananganana ny Fiadidiana Voalohany araka ny fitsipika ilay fanambarana (mitondra ny datin’ny volana martsa 1832) izay niantso manokana ho amin’ny anjara fanompoan’ny mpanolotsaina eo amin’izany Fiadidiana izany, sady nanazava ny halehiben’ilay fanendrena. Nanompo nandritra ny fotoana fohy ny Rahalahy Gause saingy nesorina tsy ho mpikambana amin’ny Fiangonana izy ny volana desambra 1832. Natokana ho amin’io anjara fanompoana voalaza io ny Rahalahy Williams ny 18 martsa 1833.
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao Independence, Fivondronan’i Jackson, Missouri, ny 26 aprily 1832. Izany dia nandritra ny filankevitry ny mpisorona avo sy ireo loholon’ny Fiangonana. Nandritra ilay filankevitra no nanohanana an’i Joseph Smith ho Filohan’ny Fisoronana Avo, dia anjara fanompoana izay efa nanokanana azy tany aloha, tamin’ny fihaonamben’ny mpisorona avo, sy ny loholona ary ny mpikambana tao Amherst, Ohio, ny 25 janoary 1832 (jereo ny sasin-teny ho an’ny fizarana 75). Io fanambarana io dia namerina ireo torolalana nomena tao anatin’ny fanambarana iray tany aloha (fizarana 78) mba hanorina orinasa—nantsoina hoe Orinasa Miray (nosoloina teo ambany fitarihan’i Joseph Smith ho lasa hoe “rafitra” ilay teny hoe “orinasa” taty aoriana)—mba hitantana ilay asam-barotra sy asa famoahana boky sahanin’ny Fiangonana.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Independence, Missouri, ny 30 aprily 1832. Azo ity fanambarana ity raha mbola niara-nivory tamin’ireo rahalahiny ny Mpaminany.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio ny 22 sy 23 septambra 1832. Efa nanomboka niverina avy tamin’ny asa fitoriana tamin’ny faritra atsinanana ireo loholona nandritra ny volana septambra ary nanao tatitra momba ny asany. Tamin’izany fotoam-pifaliana izany, raha mbola tafangona izy ireo, no nandraisana ity fanambarana ity. Niantso izany ho fanambarana momba ny fisoronana ny Mpaminany.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 27 nôvambra 1832. Ity fizarana ity dia nalaina tamin’ny taratasin’ny Mpaminany ho an’i William W. Phelps izay nonina tao Independence, Missouri. Mamaly ireo fanontaniana momba ireo Olomasina efa nifindra monina tany Ziona izany saingy tsy nanaraka ny didy mba hanokana ny fananany ka noho izany tsy nahazo ny lovany araka ny fandaminana najoro tao amin’ny Fiangonana.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 6 desambra 1832. Azo ity fanambarana ity raha mbola teo am-pitsarana sy teo am-pamoahana ny sora-tanana momba ny fandikana ny Baiboly ny Mpaminany.
Fanambarana sy faminaniana momba ny ady, nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao an-tanàna na tao akaikin’i Kirtland, Ohio, ny 25 desambra 1832. Nibahana tamin’izany fotoana izany ny fifandirana tany Etazonia mikasika ny fanandevozana sy ny fandavan’i South Carolina handoa ny vola tokony haloany amin’ny fanjakana foibe. Milaza ny tantaran’i Joseph Smith fa “Nanomboka niharihary kokoa” tamin’ny Mpaminany “ireo endrika adiady nanerana ireo firenena noho izay nisy hatrizay nanombohan’ny Fiangonana ny diany nivoaka avy tao an-tany foana.”
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio ny 27 sy 28 desambra 1832, ary ny 3 janoary 1833. Nantsoin’ny Mpaminany izy ity hoe “‘ravin’oliva’ … nongotana tamin’ny Hazon’ny Paradisa, ny hafatry ny Tompo mitondra fiadanana ho antsika.” Ity fanambarana ity dia nomena nandritra ny fihaonambe iray rehefa avy samy nivavaka “nitokana sy tamin’ny feo avo tamin’ny Tompo ny mpisorona avo maromaro ny mba hanambarany ny sitrapony amintsika mikasika ny fananganana an’i Ziona.”
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 27 febroary 1833. Ho setrin’ny fampiasan’ireo rahalahy tamin’izany fotoana izany ny paraky sy ny sigara tamin’ny fivoriana, dia voatarika ny Mpaminany mba hisaintsaina ny amin’ilay toe-draharaha; koa nanontany ny Tompo ny momba izany izy. Ity fanambarana fantatra amin’ny hoe ny Tenin’ny Fahendrena ity no valiny.
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 8 martsa 1833. Ity fanambarana ity dia fanohizana ny dingana ho fametrahana ny Fiadidiana Voalohany (jereo ny sasin-teny ho an’ny fizarana 81); vokatr’izany, dia natokana ny 18 martsa 1833 ireo mpanolotsaina voalaza etoana.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 9 martsa 1833. Tao anatin’ny fandikana ny Testamenta Taloha ny Mpaminany tamin’izay fotoana izay. Rehefa tonga teo amin’ny ampahany nisy ireo soratra tranainy natao hoe Apôkrifa izy dia nanontany ny Tompo ary nandray izao toromarika izao.
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 15 martsa 1833. Ity fanambarana ity dia manome torolalana an’i Frederick G. Williams izay vao haingana no nanendrena azy ho mpanolotsaina an’i Joseph Smith, mikasika ny andraikiny ao amin’ny Orinasa Miray (jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 78 sy 82).
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio ny 6 mey 1833.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 2 aogositra 1833. Notendrena ho kômitin’ny fanorenana Fiangonana i Hyrum Smith, i Reynolds Cahoon ary i Jared Carter.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 1 jona 1833. Ity fanambarana ity dia tohin’ny toromarika avy amin’ Andriamanitra momba ny tokony hanorenana trano iray hitsaohana sy hianarana, dia ny tranon’ny Tompo (jereo ny fizarana 88:119–136).
Fanambarana nomena tamin’ny 4 jona 1833 tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany izay nampiseho ny fandaminana ny tanàna na ny tsatòkan’i Ziona tao Kirtland mba ho fakan-tahaka ho an’ny Olomasin’i Kirtland. Tamin’ny fihaonamben’ny mpisorona avo izany, ary ny lohahevi-dehibe nobanjinina dia ny fizakana ny tany sasantsasany fantatra amin’ny hoe ny toeram-pambolena amam-piompian’i French, izay fananan’ny Fiangonana tao akaikin’i Kirtland. Noho ny fihaonambe tsy afaka nifanaraka ny amin’izay tokony hiandraikitra ilay toeram-pambolena sy fiompiana, dia nifanaraka ny rehetra fa hanontany ny Tompo ny amin’ilay raharaha.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 2 aogositra 1833. Miompana manokana amin’ny toe-draharahan’ny olomasina tao Ziona, Fivondronan’i Jackson, Missouri, ity fanambarana ity, ho valin’ny fanontanian’ny Mpaminany ny Tompo. Nianjadian’ny fanenjehana mavaivay ny mpikamban’ny Fiangonana tao Missouri tamin’izay fotoana izay ary noterena hanao sonia ny fanekena handao ny Fivondronan’i Jackson ny 23 jolay 1833.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 6 aogositra 1833. Tonga ity fanambarana ity ho setrin’ny fanenjehana nihatra tamin’ny Olomasina tao Missouri. Ny fitombon’ny isan’ireo mpikamban’ny Fiangonana izay nanorim-ponenana tao Missouri dia nanahiran-tsaina an’ireo mpanorim-ponenana hafa sasany, izay nahatsiaro fa nampatahotra azy ireo ny hamaroan’ny Olomasina sy ny hery ara-pôlitika sy ara-toekarena nentiny ary ny tsy fitoviana teo amin’ny kolotsaina sy ny fivavahana. Ny volana jolay 1833 dia nopotehin’ny olona-dratsy ny fananan’ny Fiangonana ary nisy andian’olon-dratsy namotika ny fananan’ny Fiangonana ka nanosotra tara sy volom-borona ny mpikambana anankiroa tao amin’ny Fiangonana ary nitaky ny hialan’ireo Olomasina tao amin’ny Fivondronan’i Jackson. Na dia tsy isalasalana aza fa efa henon’ny Mpaminany tany Kirtland (izay efapolo sy efajato sy arivo kilaometatra miala avy eo) ny vaovao sasantsasany momba ny olana tao Missouri, dia tamin’ny alalan’ny fanambarana ihany no nahafahany nahafantatra tamin’io daty io ny ny maha-sarotra ny toe-draharaha.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i John Murdock, ny 29 aogositra 1832, tao Hiram, Ohio. Nitory ny filazantsara nandritra ny herintaona mahery i John Murdock ka nipetraka tany amin’ny fianakaviana hafa tany Ohio ireo zanany—kamboty reny taorian’ny nahafatesan’i Julia Clapp vadiny ny volana aprily 1831—nandritra izany.
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao Perrysburg, New York, ny 12 ôktôbra 1833. Rehefa nandao ny ankohonany nandritra ny andro maromaro izy roa lahy dia somary velom-panahiana ny amin’izy ireo ihany.
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 16 sy 17 desambra 1833. Niaritra fanenjehana lehibe ireo Olomasina izay efa tafavory tao Missouri tamin’io fotoana io. Noroahin’ny mpihetraketraka hiala ny tranony tao amin’ny Fivondronan’i Jackson izy ireo; ary efa nanandrana ny nanorim-ponenana tao amin’ny Fivondronan’i Van Buren sy i Lafayette ary i Ray ny sasany tamin’ireo Olomasina, saingy nanaraka azy ireo ny fanenjehana. Tao amin’ny Fivondronan’i Clay, Missouri, ny ankamaroan’ireo Olomasina tamin’io fotoana io. Maro ireo fandrahonana ho faty natao tamin’ny mpikambana tao amin’ny Fiangonana. Nafoin’ny Olomasina tao amin’ny Fivondronan’i Jackson ny fanaka tao an-trano, ny fitafiana, ny biby fiompy ary ny fananana manokana hafa; ary maro tamin’ny voliny no nopotehina.
Kirtland, Ohio, ny 17 febroary 1834. Ny fitanana an-tsoratra avy any ifotony dia nosoratan’ny Loholona isany, Oliver Cowdery sy i Orson Hyde. Nahitsin’ny Mpaminany ny fitanana an-tsoratra ny ampitson’io ary ny andro nanaraka izany dia neken’ny filankevitra avo iray manontolo ilay fitanana an-tsoratra nasiam-panitsiana ho “fanorenana sy ho lalàna mifehy ny filankevitra avo” ao amin’ny Fiangonana. Ny andininy 30 ka hatramin’ny 32, izay miompana amin’ny Filankevitry ny Apôstôly Roambinifolo, dia natovana tamin’ny taona 1835 teo ambany fitarihan’i Joseph Smith rehefa nomanina mba havoaka ao amin’ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana ity fizarana ity.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 24 febroary 1834. Ity fanambarana ity dia azo taorian’ny fahatongavan’i Parley P. Pratt sy i Lyman Wight, izay avy any Missouri ary tonga tao Kirtland, Ohio, mba hikaon-doha miaraka amin’ny Mpaminany momba ny fanampiana sy ny fampodiana ireo Olomasina amin’ny taniny, ao amin’ny Fivondronan’i Jackson.
Fanambarana momba ny Orinasa Miray nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao na teo akaikin’i Kirtland, Ohio, ny 23 aprily 1834 (jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 78 sy 82). Azo inoana fa fivorian’ny filankevitr’ireo mpikambana ao amin’ny Orinasa Miray io fotoana io, izay nandinihina ireo zavatra ara-materialy nilain’ny Fiangonana maika. Tapaka nandritra ny fivorian’ny orinasa natao teo aloha tamin’ny 10 aprily fa hofoanana ilay orinasa. Ity fanambarana ity kosa dia manoro ny tokony hanovana ny rafitr’ilay orinasa; ka ny fananany dia tokony hozaraina amin’ireo mpikambana ao amin’ny orinasa mba ho fitantanan-draharaha ho azy ireo. Teo ambany fitarihan’i Joseph Smith dia nosoloina hoe “Lamina miray” taty aoriana ny teny hoe “Orinasa Miray” ao anatin’ity fanambarana ity.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany teo amin’ny Renirano Fishing, Missouri, ny 22 jona 1834. Teo ambany fitarihan’ny Mpaminany dia nandeha nankany Missouri ireo Olomasina avy tany Ohio sy faritra hafa, andian’olona nanao dia izay nantsoina hoe Tobin’i Ziona taty aoriana. Ny tanjon’izy ireo dia ny hitondra ireo Olomasina voaroaka avy tany Missouri hiverina any amin’ny taniny any amin’ny Fivondronan’i Jackson. Natahotra ny valifaty avy amin’ny Tobin’i Ziona ireo mponina tao Missouri, izay nanenjika ireo Olomasina teo aloha, ka nanafika mialoha ireo Olomasina sasany nipetraka tany amin’ny Fivondronan’i Clay, Missouri. Nahazo ity fanambarana ity i Joseph Smith taorian’ny nisintonan’ny governoran’i Missouri ilay fampanantenany hanohana ireo Olomasina.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 25 nôvambra 1834. Miantefa amin’i Warren A. Cowdery izay sady zoky no rahalahin’i Oliver Cowdery ity fanambarana ity.
Fanambarana momba ny fisoronana, nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, tany amin’ny volana aprily 1835 tany. Na dia noraketina an-tsoratra tamin’ny 1835 aza ity fizarana ity, ireo rakitsoratra ara-tantara dia milaza fa ny ankamaroan’ny andininy 60 ka hatramin’ny 100 dia mampiditra fanambarana iray izay nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith ny 11 nôvambra 1831. Mifandray amin’ny fananganana ny Kôlejin’ny Roambinifololahy ny volana febroary sy martsa 1835 ity fizarana ity. Angamba nambaran’ny Mpaminany teo anatrehan’ireo izay niomana ny handeha ny 3 mey 1835 hanatanteraka ny asa voalohany anirahana azy amin’ny maha-ao amin’ny kôlejy azy izy ity.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 26 desambra 1835. Voaray ity fizarana ity noho ny fangatahan’i Lyman Sherman izay efa natokana ho fitopololahy teo aloha ary tonga tao amin’ny Mpaminany, nangataka fanambarana hampahafantarana ny andraikiny.
Vavaka natolotra tamin’ny fanokanana ny tempoly tao Kirtland, Ohio, ny 27 martsa 1836. Araka ny teny nosoratan’ny Mpaminany, ity vavaka ity dia nomena azy tamin’ny alalan’ny fanambarana
Fahitana naseho an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Oliver Cowdery tao amin’ny tempolin’i Kirtland, Ohio, ny 3 aprily 1836. Fivorian’ny andro sabata tamin’izay. Izao no lazain’ny tantaran’i Joseph Smith: “Tamin’ny tolakandro, dia nanampy ireo filoha hafa nizara ny Fanasan’ny Tompo ho an’ny mpikambana ao amin’ny Fiangonana aho, rehefa avy nandray izany tamin’ny Roambinifololahy, izay tombontsoany amin’ity andro ity ny mitantana eo amin’ny latabatra masina. Rehefa avy nanatontosa ity fanompoana ho an’ny rahalahiko ity aho dia nisintona nankeny amin’ny polipitra, ka nony efa tafidina ny efitra lamba, dia niara-niankohoka tamin’i Oliver Cowdery tamin’ny vavaka mangina sy masina ny tenako. Rehefa nitsangana avy nivavaka izahay, dia nosokafana ho anay izao fahitana manaraka izao.”
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Salem, Massachusetts, ny 6 aogositra 1836. Nidiran-trosa mavesatra ireo mpitondra ny Fiangonana tamin’io fotoana io noho ireo raharahany tao amin’ny asa fanompoana. Noho ny fandrenesana fa betsaka ny vola ho azon’izy ireo any Salema, dia niainga avy tao Kirtland, Ohio, ny Mpaminany, i Sidney Rigdon, i Hyrum Smith ary i Oliver Cowdery ka nandeha nankany hanadihady io filazana io sady hitory ny filazantsara. Namita raharaham-piangonana maro ireo rahalahy ary nanao asa fitoriana bebe ihany. Rehefa hita niharihary fa tsy hisy vola ho azo, dia niverina tany Kirtland izy ireo. Hita taratra eo amin’ny fomba filazana ity fanambarana ity ny maro tamin’ireo lafiny nisongadina teo amin’ny ara-tantara.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i Thomas B. Marsh tao Kirtland, Ohio, ny 23 jolay 1837, mikasika ny Apôstôly Roa ambin’ny folon’ny Zanakondry. Ity fanambarana ity dia noraisina ny andro voalohany nitorian’ny Loholona Heber C. Kimball sy Orson Hyde ny filazantsara tany Angletera. Thomas B. Marsh no Filohan’ny Kôlejin’ny Apôstôly Roa ambin’ny folo tamin’izay fotoana izay.
Valin’ireo fanontaniana sasany, momba ny asa soratr’i Isaia, nomen’i Joseph Smith Mpaminany, ny volana martsa 1838, tao na tao akaikin’ny tanànan’i Far West, Missouri, ny volana martsa 1838.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Far West, Missouri, ny 11 aprily 1838.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Far West, Missouri, ny 26 aprily 1838, mampahafantatra ny sitrapon’ Andriamanitra momba ny fananganana io toerana io sy ny tranon’ny Tompo. Ity fanambarana ity dia mivantana amin’ireo manampahefana mpiahy sy mpikambana ao amin’ny Fiangonana.
Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany teo akaikin’i Wight’s Ferry, teo amin’ny toerana atao hoe Spring Hill, Fivondronan’i Daviess, Missouri, ny 19 mey 1838.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Far West, Missouri, ny 8 jolay 1838, momba ny andraikitra mivantana an’i William Marks, i Newel K. Whitney ary i Oliver Granger.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Far West, Missouri, ny 8 jolay 1838, ho valin’ny fitalahoana hoe: “Asehoy anay Tompo ô ny sitraponao momba ny Roambinifololahy.”
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Far West, Missouri, ny 8 jolay 1838, ho valin’ny fitalahoany hoe: “Tompo ô! Asehoy ny mpanomponao ny ampahany takianao amin’ny fananan’ny vahoakanao ho fahafolonkarena.” Ny lalàn’ny fahafolonkarena, araka ny ahafantarana azy ankehitriny, dia tsy nomena ny Fiangonana talohan’ity fanambarana ity. Ny teny hoe fahafolonkarena ao amin’io vavaka vao notsiahivina io sy ao amin’ireo fanambarana any aloha (64:23; 85:3; 97:11) dia tsy midika hoe ny iray ampahafolony fotsiny, fa ao koa ireo fanatitra an-tsitrapo rehetra na ireo fanampiana ho an’ny tahirim-bolan’ny Fiangonana. Efa nomen’ny Tompo tany aloha ny Fiangonana ny lalàn’ny fanokanana sy ny fitantanana fananana izay nanaovan’ny mpikambana (indrindra fa ireo loholona mpitarika) fanekempihavanana izay tokony haharitra mandrakizay. Koa satria nandamòka ny fitandreman’ny maro izany fanekempihavanana izany, dia notsoahin’ny Tompo nandritra ny fotoana fohy izany ary nomeny, ho an’ny Fiangonana iray manontolo ho solony, ny lalàn’ny fahafolonkarena. Nanontanian’ny Mpaminany ny Tompo ny amin’ny ampahany takiany amin’ny fananan’izy ireo ho an’ny tanjona masina. Ity fanambarana ity no valiny.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Far West, Missouri, ny 8 jolay 1838, mampahafantatra ny fandaminana ireo fananana handoavana fahafolonkarena toy ny voalaza ao amin’ny fanambarana teo aloha, dia ny fizarana 119.
Vavaka sy faminaniana nosoratan’i Joseph Smith Mpaminany tao anatin’ny epistily iray ho an’ny Fiangonana fony izy voafonja tao amin’ny fonja tao Liberty, Missouri, ary mitondra ny datin’ny 20 martsa 1839. Efa am-bolana no tao am-ponja ny Mpaminany sy ireo namany maro. Ireo fangatahana sy antso navantany tany amin’ireo mpitondra mahefa sy fahefam-pitsarana dia tsy nisy vokany.
Ny tenin’ny Tompo tamin’i Joseph Smith Mpaminany fony izy voafonja tao amin’ny fonjan’i Liberty, Missouri. Ity fizarana ity dia sombiny avy tamin’ny epistily iray ho an’ny Fiangonana izay mitondra ny daty 20 martsa 1839 (jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 121).
Ny andraikitr’ireo Olomasina amin’ny mpanenjika azy ireo, araka ny nosoratan’i Joseph Smith Mpaminany fony izy voafonja tao amin’ny fonjan’i Liberty, Missouri. Ity fizarana ity dia sombiny avy tamin’ny epistily iray ho an’ny Fiangonana izay mitondra ny daty 20 martsa 1839 (jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 121).
Fanambarana nomena ho an’i Joseph Smith Mpaminany tao Nauvoo, Illinois, ny 19 janoary 1841. Noho ny fitomboan’ny fanenjehana sy ny fomba tsy ara-dalàna nataon’ireo manampahefana taminy, dia voatery nandao an’i Missouri ireo Olomasina. Ny didim-pamongorana navoakan’i Lilburn W. Boggs, governoran’i Missouri mitondra ny datin’ny 27 ôktôbra 1838, dia tsy namela safidy ho azy ireo. Efa naorin’ny Olomasina teo amin’ny toerana nisy ilay tanàna kelin’i Commerce teo aloha, Illinois, ny tanànan’i Nauvoo, raha nomena ity fanambarana ity ny taona 1841, ary teo no natsangana ny foiben-toeran’ny Fiangonana.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Nauvoo Illinois, ny volana martsa 1841, momba ireo Olomasina tao amin’ny faritanin’i Iowa.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao an-tranon’i Brigham Young tao Nauvoo, Illinois, ny 9 jolay 1841. Filohan’ny Kôlejin’ny Apôstôly Roa ambin’ny folo i Brigham Young tamin’izay fotoana izay.
Epistily avy amin’i Joseph Smith Mpaminany ho an’ireo Olomasin’ny Andro Farany tao Nauvoo, Illinois, mirakitra ireo sori-dalana momba ny batisa ho an’ny maty, mitondra ny datin’ny 1 septambra 1842 tao Nauvoo.
Epistily avy amin’i Joseph Smith Mpaminany ho an’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany, mirakitra sori-dalana bebe kokoa momba ny batisa ho an’ny maty ary mitondra ny datin’ny 6 septambra 1842, tao Nauvoo Illinois.
Torolalana nomen’i Joseph Smith Mpaminany, tao Nauvoo, Illinois, ny 9 febroary 1843, izay mampahafantatra ireo fanalahidy lehibe telo izay ahazoana manavaka ny toetra marin’ireo anjely manompo sy fanahy.
Ireo lafim-pampianarana nomen’i Joseph Smith Mpaminany tao Ramus, Illinois, ny 2 aprily 1843.
Torolalana nomen’i Joseph Smith Mpaminany tao Ramus, Illinois, tamin’ny 16 sy 17 mey 1843.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Nauvoo, Illinois, noraketina ny 12 jolay 1843, momba ny fanekempihavanana vaovao sy maharitra mandrakizay, ahitana ny maha-mandrakizay ny fanekempihavanan’ny fanambadiana, ary ny fitsipiky ny fampakarana vady maro. Na dia tamin’ny taona 1843 aza no noraketina an-tsoratra ity fanambarana ity, dia misy porofo maneho fa ny sasany amin’ireo fitsipika ao anatin’ity fanambarana ity dia efa tany amin’ny taona 1831 no nahafantaran’ny Mpaminany azy. Jereo ny Filazana Ôfisialy 1.
Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny 3 nôvambra 1831. Rehefa nosoratana ny sasin-tenin’ity fanambarana ity izao no lazain’ny tantaran’i Joseph Smith: “Tamin’izay fotoana izay dia nisy zavatra maro nirian’ireo loholona ho fantatra momba ny fitoriana ny Filazantsara amin’ireo mponin’ny tany sy momba ny fanangonana; ary mba handehanana amin’ny tena hazavana sy hampianarina avy any ambony, dia nanontany ny Tompo aho ny 3 nôvambra 1831 ary nandray izao fanambarana lehibe manaraka izao.” Natambatra ho toy ny tovana tamin’ny bokin’ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana aloha ity fizarana ity vao nomena laharana taty aoriana.
Filazana ny finoana mikasika ny governemanta sy ireo lalàna amin’ny ankapobeny, nolaniana tamin’ny safidy niraisana nandritra ny fihaonamben’ny Fiangonana natao tao Kirtland, Ohio, ny 17 aogositra 1835. Olomasina maro no niara-nivory mba handinika ny votoatin-kevitra natolotra ho an’ny famoahana voalohany ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana ho boky. Tamin’izay fotoana izay, dia nomena izao sava ranonando manaraka izao ity filazana ity: “Mba tsy hahazoana mandiso na mandika vilana ny finoantsika mikasika ny governemantan’ny tany sy ireo lalàna amin’ny ankapobeny, dia noheverinay fa mety ny hanoloranay any amin’ny faran’ity boky ity ny hevitray momba izany.”
Fanambarana ny naha-maty maritiora an’i Joseph Smith Mpaminany sy ny Patriarika Hyrum Smith rahalahiny tao Carthage, Illinois ny 27 jona 1844. Ity rakitsoratra ity dia nampidirina tany amin’ny faran’ny edisiônan’ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana nivoaka tamin’ny 1844 izay efa akaiky ho vonona hatonta tamin’ny fotoana namonoana an’i Joseph sy i Hyrum Smith.
Ny teny sy ny sitrapon’ny Tompo nomena tamin’ny alalan’ny Filoha Brigham Young tao Winter Quarters, ny tobin’i Isiraely, tao amin’ny tanin’ny Omaha, tamin’ny ilany andrefana amin’ny Reniranon’i Missouri, akaikin’i Council Bluffs, Iowa.
Fahitana nomena an’Joseph Smith Mpaminany tao amin’ny tempolin’i Kirtland, Ohio, ny 21 janoary 1836. Fanatanterahana ireo ôrdônansy ho fiomanana ho amin’ny fanokanana ny tempoly tamin’io fotoana io.
Fahitana nomena ny Filoha Joseph F. Smith tao Salt Lake City, Utah, ny 3 ôktôbra 1918. Tamin’ny lahateniny ho fanokafana ny Isanenimbolan’ny Fihaonamben’ny Fiangonana faha 89 ny 4 ôktôbra 1918, dia nilaza ny Filoha Smith fa nanana fifandraisana maro tamin’ Andriamanitra izy nandritra ireo volana teo aloha. Anankiray tamin’ireny ilay noraisin’ny Filoha Smith, andro iray talohan’izany, momba ny famangian’ny Mpamonjy ireo fanahin’ny maty raha mbola tao am-pasana ny vatany. Nosoratana taorian’ny fifaranan’ny fihaonambe avy hatrany izany. Ny 31 ôktôbra 1918, dia natolotra hankatoavin’ireo mpanolotsaina ao amin’ny Fiadidiana Voalohany, ny Filankevitry ny Roambinifololahy ary ny Patriarika izany ary nankatoavin’izy ireo tamin’ny alalan’ny faneken’ny daholobe.
Mampianatra ny Baiboly sy ny Bokin’i Môrmôna fa ny fanambadiana olon-tokana no fenitry ny fanambadiana ho an’ Andriamanitra raha tsy hoe manao fanambarana hafa izy (jereo ny 2 Samoela 12:7–8 sy ny Jakoba 2:27, 30). Taorian’ny fanambarana ho an’i Joseph Smith, dia nampidirina teo anivon’ny mpikamban’ny Fiangonana ny fampakarana vady maro taona vitsy taorian’ny 1840 (jereo ny fizarana 132). Nanomboka tamin’ny taona 1860 ka hatramin’ireo taona vitsy taorian’ny taona 1880 dia nandany lalàna maro ny fitondram-panjakana tany Etazonia mba handrarana io fomba fanao ara-pivavahana io. Neken’ny Fitsarana Avon’i Etazonia ireo lalàna ireo tamin’ny farany. Rehefa avy nandray fanambarana ny Filoha Wilford Woodruff dia namoaka izao fanehoan-kevitra an-tsoratra manaraka izao izay neken’ny Fiangonana ho zavatra ôfisialy sy tsy maintsy hajaina tamin’ny 6 ôktôbra 1890. Izany no nitarika tany amin’ny fiafaran’ny fampakarana vady maro tao amin’ny Fiangonana.
Mampianatra ny Bokin’i Môrmôna fa “ho an’ Andriamanitra dia mitovy ny rehetra,” ka ao anatin’izany “na mainty na fotsy, na andevo na olon’afaka; na lahy na vavy” (2 Nefia 26:33). Nandritra ny tantaran’ny Fiangonana dia olona avy amin’ny firazanana sy foko rehetra avy amin’ny firenena maro no natao batisa ary niaina toy ny mpikambana mahatokin’ny Fiangonana. Nandritra ny androm-piainan’i Joseph Smith dia nisy mpkamban’ny Fiangonana maintsy fihodirana vitsivitsy notendrena ho amin’ny fisoronana. Tany am-piandohan’ny tantaran’ny Fiangonana dia najanon’ireo mpitarika tao amin’ny Fiangonana ny fanendrena ireo lehilahy mainty fihodirana taranaka Afrikana ho amin’ny fisoronana. Tsy manome fanazavana feno mikasika ny loharano niavian’izany fomba fanao izany ny tahirintsoratry ny Fiangonana. Nihevitra ireo mpitarika tao amin’ny Fiangonana fa nilaina ny fanambarana avy amin’ Andriamanitra mba hanovana io fomba fanao io ka nikatsaka fitarihana tamin’ny alalan’ny vavaka izy ireo. Tonga tamin’i Spencer W. Kimball Filohan’ny Fiangonana ny fanambarana ary nambara tamin’ireo mpitarika hafa tao amin’ny Fiangonana tao amin’ny Tempolin’i Salt Lake ny 1 jona 1978. Io fanambarana io no nanala ireo famerana rehetra mikasika ny firazanana izay nisy fotoana nampiharina tamin’ny fisoronana.